Famerenana sy fanamarihana boky sy soratra - ikkaro
firosoana >> boky >> Fanamarihana sy fanamarihana
Tsy tsikera hampiasaina izy ireo. Mampiasako ny fidiran'ny bilaogy, bebe kokoa hanoratako ireo hevi-dehibe tiako ho tadidiko sy izay tadiaviko hadihadiana fa tsy hamerina hijery ny hevitro momba ny zavatra tsapako momba ilay boky.
Araka izany, hahita fampahalalana mifandraika betsaka amin'ny takelaka tsirairay ianao. Teny nalaina, angon-drakitra manokana mahaliana, olana izay mipoitra ary tiako halalinina, fifandraisana sy fifandraisana hitako amina boky hafa, hetsika ara-tantara sns sns ary taratry ny tena manokana.
Famakiana izany ataoko izany. Tsy boky tsy novakiako no resahiko.
Manantena aho fa hanampy anao hanohy mianatra sy hitombo toa ahy izy ireo.
Fikarohana ny tranokalan'ny tranomboky ny tanànako no hitako V ho an'i Vendetta avy amin'i Alan Moore sy David Lloyd. Naheno an'ity tantara an-tsary ity ho toy ny asa-piraika aho ary tena te hamaky azy io.
Mazava ho azy fa misy fampahalalana betsaka kokoa noho ny amin'ny sarimihetsika ary misy dikany daholo ny zava-drehetra. Eto no ahitantsika hoe avy aiza i V miaraka amin'ny saron-tava Guy Fawkes, ny kapa ary ny satrony. Azontsika tsara ny sahan-kevitra sy ny antony hisian'ny valifaty.
Izany dia tsangambato amin'ny solomaso, famantaranandro silamo ary horolojia hafa nosoratan'i Antonio Fernández-Puertas izay profesora momba ny tantaran'ny kanto silamo ao amin'ny Oniversiten'i Granada. Izy dia ao amin'ny College of Museums Superior ary talen'ny National Museum of Hispanic-Muslim Art ao amin'ny Alhambra.
Tsy famakiana ho an'ny rehetra izany, fa raha te-hiditra amin'ity tontolon'ny famantaranandro rano ity ianao, automatons, horôlôjia sns dia ho tianao izany. Ho fanampin'ny filazalazana gadget marobe sy milaza aminay ny toerana sy ny fotoana nanondroana azy ireo dia niditra tao amin'ny empira Byzantine izahay mba hijery kely ny hakanton'izy ireo sy ny zava-mahatalanjona tokony nananan'izy ireo.
Indrindra fa tsy misy fampahalalana betsaka amin'ny Internet momba an'i Clepsydras ary izay misy dia tsy hitako feno.
Mamaky aho Seda y Tany kristaly nataon'i Alessandro Baricco taona maro lasa izay. Ny voalohany novakiako imbetsaka, ny faharoa very ao amin'ny fitadidiako, saingy mitazona am-panajana ity mpanoratra ity aho. Ka rehefa hitako tao amin'ny tranomboky ity boky famerenana ity dia tsy nieritreritra an'izany aho. Tiako ny mamaky izay novakin'ny olona novakiako :)
Hevitra iray momba an'izao tontolo izao boky famerenana boky io. Tsy avy amin'ireo boky tianao indrindra, fa avy amin'ny boky tianao nandritra ny 1 taona teo ho eo. teo anelanelan'ny 2011 sy 2012.
Misy boky 50, izay samy misy famerenana pejy 3 eo ho eo, izay ilazany amintsika ny zavatra tsapany, ny tetika na tantara iray mifandraika amin'ilay boky. Boky boky izy io, karazana izay azontsika ampidirina ao 84, Charing Cross Road.
Voasoratra sy notantaraina tamin'ny fomba tena marefo daholo.
Efa ela no nanarahako Daniel Innerarity ao amin'ny Twitter ary fahafinaretana foana ny mamaky ny fisaintsainanao. Ka na eo aza ny tsy te-hamaky lahatsoratra momba ny areti-mandringana aorian'ny fiasco of Covid-19 avy amin'i Zizek. Izaho dia sahy Pandemokrasia. filozofia amin'ny krizy virus coronavirus y Tiako be izany.
Ny voalohany. Ankasitrahana fa voarafitra tsara ilay lahatsoratra, manana ny toe-javatra mazava ary miady hevitra momba ireo hevitra izy, fa misy kofehy iraisana mandritra ny lahatsoratra ary tsy hevitra fivahinianana mpivahiny akory izy ireo. Izay rehetra tsy nataon'i Zizek.
Lahatsary mora vidy sy mora vakina izy io. Aza matahotra mamaky azy raha tsy zatra an'ity karazana ity ianao, ary aza matahotra ny prologue Meritxell Batet izay sarotra kokoa ny manaraka azy noho ny lahatsoratr'i Innerarity.
Basilisco, nataon'i Jon Bilbao dia boky mahafinaritra, na dia avy amin'ny mpanonta Impedimenta tsy mahagaga ahy izany.
Tsy afaka manomboka an'io asa io isika raha tsy mahafantatra hoe inona izany basilisk, zavaboary angano izay afaka mamono amin'ny fahitana azy. Miaraka amin'ny vatan'ny bibilava sy ny tendrony, dia noheverina ho mpanjakan'ny bibilava izy io. misy angano maro ao ambadika ao, ary tsy ity no lahatsoratra momba azy.
Tena tiako ilay izy, saingy navela niaraka tamin'ny fahatsapana fa tsy nahavita nahatakatra ny zava-drehetra aho, fa misy sisiny eny amin'ny habakabaka izay tsy vitako ny nisambotra ary mila famakiana faharoa izany.
Ny alina dia mitoetra ho an'ny iza izy.
Orana mavo Boky mahafinaritra an'i Julio Llamazares izy io. Ho ahy kintana 5 ary na izany aza dia tsapako fa tsy novelomina ho an'ny rehetra izany. Tokony hamaky azy am-pitoniana ianao ary hankafy azy io am-pitoniana.
Aza manomboka mamaky ilay boky raha tsy manana ny vatana noho ny alahelo, alahelo, alahelo ary mamaky milamina. Nampitandremana ianao.